Uru Ofufe thebọchị: Nkwado Chukwu | Ilblogdellafede
Vozo Etu nke ụbọchị: Providence Chineke
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 7, 2020 Ọgọstụ 8, 2020
1. Providence di. Enweghị mmetụta n’enweghị ihe kpatara ya. N'ime ụwa ị na-ahụ iwu na-adịgide adịgide nke na-achịkwa ihe niile: osisi na-emeghachi mkpụrụ ya kwa afọ; nwa nnụnụ na-achọta ọka ya mgbe niile. akụkụ ahụ na sistemụ nke ahụ mmadụ na-anabata ọrụ zuru oke maka ebumnuche ha: establishednye guzobere iwu na-achịkwa ngagharị nke anyanwụ na kpakpando niile? Nye na-esite n’eluigwe zitere mmiri ozuzo na igirigi. Providence gị, Nna, na-achịkwa ihe niile (Sap., XIV). I kwenyere na ya, ighara i nweghi nchekwube? ̀ na-eme mkpesa banyere Chineke?
2. Nsogbu na ikpe na-ezighi ezi. Ọrụ Chineke bụ ihe omimi dị omimi nye uche anyị; Ọ bụghị ihe niile mara ihe kpatara na mgbe ụfọdụ ndị ajọ omume na-enwe mmeri na ihe ọjọọ kachasị njọ ya! Nke a ka Chineke kwere ka iji gosipụta ezi ihe ma mee ka amara ha okpukpu abụọ; ịkwanyere nnwere onwe nke mmadụ ùgwù, onye naanị otu a ga - esi nweta ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ntaramahụhụ ebighị ebi. N’ihi ya, enwekwala nkụda mmụọ ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ọtụtụ ikpe na-ezighị ezi n’ụwa.
3. Ka anyị tinye onwe anyị na Providence. Nu enweghị otu narị ihe ngosipụta banyere ịdị mma ya? O wepugaghi onwe-gi n'ihe-ọgwu nke puku. Eme mkpesa Chineke ma ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe niile dịka atụmatụ gị si bụrụ: ọ bụghị Chukwu, ọ bụ gị na-eduhie gị. Tụkwasịn obi na Providence maka mkpa gị niile, maka ahụ, maka mkpụrụ obi, maka ndụ ime mmụọ, ruo mgbe ebighi ebi. Onweghi onye tụkwasara ya obi ma duhie ya (Ekli. II, 11). St. Cajetan nweta gị ntụkwasị obi ya na Providence.
EGO. - Mee nrube isi na ntụkwasị obi na Chineke; gụghachiri Pater ise na S. Gaetano da Tiene, onye anyị na-eme oriri taa
← Na post gara aga Gara aga post:Na-eche echiche taa ma ị dị njikere ịsị "Ee" na Chineke
Ọzọ Post → Post ozo:San Gaetano, Saint nke ụbọchị maka 7 Ọgọst